Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iplane yabahambi uSkyward Express yaphazamiseka eKenya
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • IKenya Breaking News • iindaba • Safety • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
I-Skyward Express Dash8
Abakhweli kwinqwelo-moya yorhwebo iSkyward Express eKenya babenethamsanqa xa basinda ekonzakaleni nasekuswelekeni emva kokwenza ingozi kwindawo ekude yelizwe.
Isicwangciso sabakhweli bengingqi esiqhutywa yingozi yeSkyward Express sifike eKenya ngale njikalanga.
Ukugcina i-Kenya Civil Aviation Administration bonke abakhweli babalekile kwindiza. Akukho zikhewu zichaziweyo
Ingozi yenqwelo moya ifike kwiziko lomkhosi waseKKenya e-Elwak, kwiphondo elikude iMandera
Iinqwelomoya ezincinci eziqhutywa ngenqwelomoya yenqila esekwe eNairobi I-Skyward Express ukwazile ukonakalisa umhlaba eBoru Hache kufutshane nomda waseKenya- owaseSomalia-wase-Ethiopia.
Inqwelomoya ibonakala njengeDash8- Q 300
IMandera likomkhulu leNdawo yaseMandera kwiPhondo laseNyakatho-mpuma yeKenya. Ime malunga ne-3 ° 55'N 41 ° 50'E, kufutshane nemida neSomalia ne-Ethiopia.
ISkyward Express, yinkampani yabucala yenqwelo moya esebenza eKenya. Isebenza indawo ekuyiwa kuyo, ukusuka kwiindawo zayo ezimbini zokusebenza kwisikhululo senqwelomoya iWilson kubahambi kunye neJomo Kenyatta International Airport yemithwalo. Zombini izikhululo zeenqwelo moya zibekwe eNairobi, idolophu elikomkhulu laseKenya.
Inqwelomoya yomoya igcina ikomkhulu layo kwisikhululo senqwelomoya iWilson, ngaphakathi eNairobi, esona sixeko sikhulu saseKenya nakwikomkhulu lelizwe. Isikhululo senqwelomoya iWilson sime malunga neekhilomitha ezi-5 (3 mi), ngasendleleni, emazantsi mpuma embindini wedolophu.
I-airline igcina isakhiwo sabucala kwi-Wilson Airport, ekusebenziseni kuphela abasebenzi be-Skyward Express kunye nabaxhasi. Esi sakhiwo "sixhotyiswe ngendawo yokutyela yale mihla", phakathi kwezinye izinto eziluncedo.
I-Skyward Express yasekwa ngo-2013, ngabaqhubi beenqwelo moya ababini; Omnye wabo ungusihlalo wenqwelomoya, ngelixa omnye esebenza njengomphathi wolawulo. ISkyward Express izuze njengelinye izixhobo kunye neendlela ezithile zokungasebenzi I-Skyward International Aviation.
Ukupheliswa kwenkonzo yi-Skyward International Aviation, abaqhubi beenqwelo moya ezimbini, U-Mohamed Abdi kwaye U-Issack Somow yaqala iSkyward Express kwaye yaqala ukusebenza kwezorhwebo ngo-2013. Ekuqaleni, inqwelo moya yabe inikezela ngetshata yabakhweli kunye nenkonzo yemithwalo phakathi kweNairobi, Kenya, neendawo ezikufuphi ne Somalia. Ezi nkonzo zibandakanya ukuhanjiswa kwemiraa ukusuka eNairobi ukuya eSomalia.
Ngokufunyanwa kweenqwelomoya, inqwelomoya yande kwaye yahlulahlula inkonzo yabakhweli kunye nemithwalo ukuba ibandakanye indawo ezininzi kunye nokuhamba rhoqo kwiindawo ezityebileyo zeoyile kumantla ntshona eKenya nakwindawo ezinomtsalane kubakhenkethi.